Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » Iqela le-WestJet libhengeza uMongameli omtsha wethutyana kunye ne-CEO
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseKhanada eziziiNdaba • iindaba • abantu • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel
UHarry Taylor uthatha ngokusemthethweni indima kaMongameli wethutyana weWestJet Group
UHarry Taylor ukhokele umba wokusungulwa kwebhondi yase-WestJet yase-US, wathethathethana ngokuthengwa kwenqwelomoya ye-Boeing 787 Dreamliner kunye ne-Boeing MAX, kwaye yaba negalelo ekuthengisweni kwe-WestJet kwi-Onex.
Iqela leWestJet namhlanje libhengeze ukuba uHarry Taylor uye wathatha ngokusemthethweni indima yoMongameli wethutyana kunye neGosa eliLawulayo eliyiNtloko (CEO).
The I-WestJet Iqela labhengeza uTaylor njengoMongameli wethutyana kunye ne-CEO ngoSeptemba 15, 2021, kulandela iindaba zokuthatha umhlalaphantsi kuka-Ed Sims ezibhengezwe nge-9 kaJuni ngo-2021.
“Ndiwongekile ngokuthatha indima yethutyana ye-CEO ngeli xesha libalulekileyo kwiQela le-WestJet, kwaye ndigxile ekuzibopheleleni kwethu kukhuseleko ngaphezu kwayo yonke into ngelixa siqinisekisa ukuqhubekeka kokuchacha kwethu, njengoko sisakha iinqwelomoya zethu kwiindwendwe kunye nabantu bethu. ,” utshilo uHarry Taylor, uMongameli wethutyana kunye ne-CEO.
“Ekupheleni konyaka, siza kubuyisela yonke inqanawa yethu kwinkonzo yexesha leholide encopho yohambo, sidibanisa abantu esibathandayo kunye nokuzalisekisa izicwangciso zeholide esele zilindiwe. Ndijonge phambili ekukhokeleni umbutho wethu kwesi sigaba sibalulekileyo sokuchacha kwethu, ngelixa siqhubeka nokukhangela i-CEO esisigxina. ”
"Ndonwabe kakhulu ukuba uHarry uvumile ukuthatha le ndima yethutyana," utshilo I-WestJet USihlalo weBhodi yeQela uChris Burley. "Ukukhangela kwethu i-CEO esisigxina kwihlabathi jikelele kuyaqhubeka, kwaye egameni le-WestJet kunye nebhodi, siyambulela uHarry eye wasinceda kolu tshintsho lunzima."
UHarry Taylor wajoyina I-WestJet ngowama-2015 njengoSekela-Mongameli weSigqeba kunye neGosa eliyiNtloko lezeziMali (CFO). Ngeli xesha, ukhokele umba wokuqaliswa kwebhondi yenqwelo moya yase-US, wathethathethana ngokuthengwa kwenqwelomoya ye-Boeing 787 Dreamliner kunye ne-Boeing MAX, kwaye waba negalelo ekuthengisweni kwe-WestJet kwi-Onex. Ngolu bhubhane, uHarry wakhokela iqela lezeziMali ekulawuleni ukungabikho kwemali eWestJet ukuqinisekisa uzinzo kungekho ngeniso ingenayo.
“Ndifuna ukubulela u-Ed ngegalelo lakhe kwisicwangciso se-WestJet kunye namanyathelo okukhula kule minyaka mine idlulileyo,” utshilo uChris Burley, uSihlalo webhodi yabalawuli be-WestJet. “U-Ed ukhokele i-WestJet kweyona ngxaki imbi kwimbali yezophapho kwaye uza kusigcina kude kube sekupheleni kuka-2021. Sityala amandla ethu alinganiselweyo kunye nozinzo olungephi kubunkokeli buka-Ed kunye nesandla esizinzileyo. Kwinqaku lobuqu, siyavuya kuba uEd ezokwazi ukuphinda abe nentsapho yakhe Nyu Zilend ekupheleni konyaka.”